लकडाउनको प्रभाव : उपचार नपाउँदा तीन बालिकाको मृत्‍यु
केन्द्रबिन्दु संवाददाता १६ चैत्र २०७६
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी जोखिम न्यूनिकरणका लागि देशव्यापी लकडाउन भएको प्रतिकूल अवस्थामा उपचार नपाएर तीन बालिकाको ज्यान गएको छ।
काठमाडौंका दुई र सर्लाहीका एकजना बालिकाको उपचारमा पहुँच नपुगेर निधन भएको कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याउन नपाउँदै बाटोमै बालिकाको ज्यान गएको हो। अस्पताल आए लगत्तै ८ महिनादेखि ५ वर्षकी बालिकालाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
लकडाउनका कारण सवारी साधन नचलेको र अभिभावककमा पनि सुझबुझ नहुँदा अकालमा बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको डा. पौडेलले बताए। दश वर्ष मुनिका तीनजना बालबालिकालाई अस्पताल पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै ज्यान गइसकेको थियो।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि चैत बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभरका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको भोलिपल्ट उनीहरुको निधन भएको हो। डा. पौडेलकाअनुसार, तीन दिनको अवधिमा तीनजना बालिकाको निधन भएको छ। ‘लकडाउन सुरु भएकै दिनमा यो घटना भयो। लगातार जस्तो बालिकाले ज्यान गुमाउन पुगे। ज्यादै दुःख लाग्यो’, उनले भने। चैत ११ र १२ गते यी घटना भएका थिए। अन्नपूर्णबाट
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७६ ०८:४५ आइतबार
बलात्कारबाट गर्भवती भएकी बालिकाको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने
हेटौंडाको राप्ती खोलामा बालिकाको शव फेला
अभिभावक घरमा नहुँदा आगलागी हुँदा तीन बालिकाको मृत्यु